Best 25 Anchor Tattoos Design Mazano Kwevarume nevakadzi - Tattoos Art Ideas
Best 25 Anchor Tattoos Design Mazano Kune Varume nevakadzi
Anchor tattoos zvinoreva chimwe chinhu chiri nyore; kugadzikana. Kugadzikana kunogona kuratidzwa mumamiriro akasiyana-siyana. Kune zvizhinji zvehupenyu izvo munhu anogona kugadzikana uye imwe nzira yekudada kuiratidza iri kure kuburikidza ne tattoo. Kushandiswa kwe # tatchor tattoo kunoshandiswa nevanhu vakawanda kuti vataure nyaya dzisingatauri dzezvavakapfuura mune dzimwe nhanho dzehupenyu hwavo.
Anchor tattoo zvinoreva
Anchor tattoo inomiririra simba uye kugadzikana. Wati waona tattoo yekare here? Ichi # tattoo yakatanga makore mazhinji akapfuura neVaSumerian. Iko tattoo yakave imwe yezvinyorwa zvekare zvekare uye yakashandiswawo nevaKristu vepakutanga. Izvi zvakaitika pavakatambudzwa nekuda kwezvavanotenda. Inosanganisira kushandiswa kwemvura mune rimwe sangano regungwa rakafanana neswindo, simba, kuchengeteka uye kuchengeteka,
Iyo tattoo yehange yakashandiswa kutaura zvinhu zvakawanda. Yakanga ishandiswa kufananidzira muchinjikwa uye zvakare yakataura pamusoro paJesu Kristu uye kutambudzika kwake pamuchinjikwa. Rakataurawo nezvemasimba evanhu nevakadzi avo ani zvake anogona kushandisa. Nhasi, anchoti inogona kuenzaniswa nezvimwe zvinhu kuti ipe imwe dudziro. Anchor tattoos anoshandiswa inomiririra ukama hutsva, nokuti hunofananidzira kukwanisa kuramba uchifamba panguva dzekutambudzika. Sezvo pasina huwandu hwakawanda pamusoro pematoto muzana remakore re21, tattoo yeAnchor inowanikwa munharaunda yakawanda nekuda kweshoko rayo uye kuenzanidza. Pane nguva dzose nenyaya ye tattoo yechinotsiro iyo ineded pamuviri. Ndizvo chete munhu anogadzika anokwanisa kuudza nyaya idzi kune vamwe.
1. Cool anchor tattoo design chinangwa chetsoka rwomusikana
Mazuva ano, tattoo yave yakashanda iyo isu tiri kuona vanhu vazhinji vachiuya kugamuchira tattoo yakafanana neizvi. Kune mhando mbiri dzemutumbi wenyama; izvo zvachose uye zvigadzirwa zvenguva pfupi. Chisarudzo ndechekuti iwe usarudze.
2. Shandisa anchor tattoo ink pfungwa yevakadzi
Chirevo chekusingaperi chinogona kupera zvishoma nezvishoma nokukwegura asi chinogona kunge chisingaendi kubva mumuviri kunze kwekugadzirisa zvakanyanya.
3. Tambo anchor tattoo pfungwa nemashoko, Usazvirega iwe urere
Kurapa kwema Laser kunogona kushandiswa asi kurwadziwa kunobatanidza nehuwandu hunovhiringidza.
4. Anoshamisa ruoko anchor tattoo design pfungwa yevasikana
Ichi ndicho chikonzero nei vanhu vachitya kuenda kune rudzi urwu rwekutora. Iko mari yekuita izvi inodhurawo izvo zvisingabatsiri.
5. Kudzoka kwechikadziso chechikwata chinyorwa kugadzira pfungwa yevakomana
Iyo tattoo yenguva duku inogona kubviswa nyore nyore. Iko pigment iyi ineded pane zvigadzirwa zveganda rekunze izvo zvinongosiya kubva epidermis ruvara. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti iwe unogona kurasikirwa mamwe ehombodo dzako masero kana zvabviswa.
6. Mifananidzo yakaisvonaka yemaruva uye anchor tattoo pfungwa pachidya
Usanetseka pamusoro pemasero eganda ari kurasikirwa nokuti aizokura zvakare munguva pfupi. Kana iwe uchifunga nezvekutora chirairo ichi asi usingazivi kana zvichava izvo iwe ungada kuichengeta kwenguva yakareba, enda kune yakagadzirwa kwenguva pfupi.
7. Shanduro yekunyorera shanduro kugadzira pfungwa yevakomana
Izvo zvinotevera zvemigumisiro yechiratidzo zvenguva duku hazvienzaniswi zvakanyanya nemutoto usingaperi unotora nguva yekuporesa mushure mokubviswa.
8. Anchor tattoo design pfungwa pedyo nehombodo
Iwe haufaniri kunge uchikurumidza kuwana tattoo inked kana iwe uine chisarudzo pamusoro pekugadzirwa. Ichi chinyorwa chakaitwa nemunhu ane unyanzvi akaita basa rinoshamisa pamwe chete ne #idea yomushandisi.
9. Biceps anchor tattoo design pfungwa yevakomana
Iwe hausi kuzonzwa kurwadziwa kana chiri chigadzirwa chenguva pfupi. Zvisinei, kune avo vanoda kuda kuwana tattoo iyo inogara nokusingaperi, iwe unofanirwa kuva wakagadzirira kutsungirira kurwadziwa paunenge wabviswa.
10. Mifananidzo yakaisvonaka yemaruva uye anchor tattoo ink pfungwa nokuda kworuoko
Kanganwa nezvekurasikirwa neropa kana zvasvika pakushamba kwekanguva # kusina kusiyana nekugadzikana kwemavara tattoo.
11. Couple anchor tattoo pfungwa pamaoko
Wati wamboshamisika here kuti ichi chinyorwa chakanaka chakaitika sei?
12. Bata nehafu yengarave tora chikwata chevakadzi
Nguva iyo yakapinda mairi, kutariswa kwakapiwa uye mari yacho ndeimwe yezvinhu zvaunogona kufunga paunenge uchienda kune chinyorwa. Iwe unonakidzwa zvikuru kana une tattoo inoshamisa yakaita seyi. Funga nezvazvo.
13. Chidiki uye chinyorwa chinonzi tattoo chimiro chikonzero chevasikana pamakumbo
14. Traditional Anchor tattoo on hand
Iwe unogona kuona tattoo yehange iyo ine ribhoni inopararira kune iyo nezwi 'Family' rakanyorwa pamusoro payo. Dzimwe nguva, unogona kuwana baba kana amai pavari. Aya mazwi anoratidza hurukuro pamusoro pesimba uye chisungo kwavari. Iwe unogona kunge uine hukama hwakakunda dombo kakawanda asi huchiri kuuya kuzokuita. Izvo zvaunoda kuwana ndeye tattoo anchor. image source
15. Mifananidzo yakaisvonaka yemaruva uye anchor tattoo design pfungwa
16. Wrist anchor tattoo design pfungwa yevasikana
Chinhu chokutanga chamunofanira kuita musati mawana tattoo chikwata ndechokutsvakurudza zvishomanana pamhando yechikwata chichakutorerai. Kune nzvimbo dzakawanda apo mazamu aya anogona kurara pamuviri wemunhu. Ukuru hwetambo kunogona kuvimba paunoda kuti iiswe. Kunyange rutivi rweminwe inogona kuva nzvimbo yakakwana yokusiya tattoo yako yechina. image source
17. Dreamcatcher uye anchor tattoo pfungwa yevasikana pawrist
Anchor inogona kutaurwa kuti iyo simba rinogona kubata chero ngarava iyo vafambisi vezvikepe vanoda kuti ive isina kufamba. image source
18. Inonakidza anchor tattoo design ink pfungwa yevakadzi
Nhasi, vanhu vari kutora matanho anchoti anovaudza kuti vanogona kumira apo zvinhu zvose zvinoratidzika sezviputsika. image source
19. Vakadzi vaviri vanobatanidza tattoo pfungwa pamaoko
Kushandiswa kwechikwata chechikwangwani kunogonawo kuva chisungo icho chichagadzirisa ushamwari pamwe chete; chiyeuchidzo chezvinhu zvose zvakanaka zvava kuda kuzoitika uye ukama hwepedyo pakati pemhuri. image source
20. Chikamu chemuviri anchor tattoo pfungwa kune vasikana
Kana uri mucherecheti wekotodo, kushandiswa kwetikiti zvechikwangwani kunogona kufamba nenzira yakareba mukukupa mashoko iwayo iwe unonyatsoda. image source
21. Nyeredzi uye anchor tattoo kugadzira ink pfungwa kune vasikana netsoka
Iwe unoda sei kutora tema tattoo? Kune nzvimbo dzakadai semakumbo, mutsipa nehudyu uko iwe unogona kushandisa tattoo. image source
22. Mwoyo uye anchor tattoo design pfungwa pamaoko
Iwe unogona kuenzanisa tattoo yako nemaruva, mazwi, zvigadzirwa uye mamwe akawanda maumbirwo. Chimwe nechimwe chezvigadzirwa zvinouya nehombodo yechechi inofadza. image source
23. Nyeredzi dzinofamba dzichibata anchor kugadzira tattoo pfungwa yevakadzi zvakare
Ma Tattoos ave imwe yezvinhu zvaidiwa zvefashoni izvo vanhu vazhinji vari kuenda mazuva ano. Iwe haugoni kurasikirwa nemutambo wacho nekanyora yekunyorera pane chero chikamu chemuviri wako. image source
24. Anchor tattoo pfungwa nemashoko, Usambofa
Tarisa maitiro akasiyana-siyana uye sarudza zvakanakisisa kwauri. image source
25. Mifananidzo yakaisvonaka yematare yakagadzirwa nekodzero pfungwa yevakadzi
Dzvanya pano kuti uwane mamwe Anchor Tattoo Designs
scorpion tattoocross tattoosHeart Tattooszuva tattoostribal tattoostattoos kuvanhumimhanzi tattooscherry blossom tattooinfinity tattoosleeve tattoosAnkle Tattooscat tattooswatercolor tattoohenna tattooshumba tattookorona tattoostattoos for girlsneck tattooschifuva tattoostattoo ideaszodiac zviratidzo zviratidzoeagle tattoosrose tattooscute tattoostattoo yezisoFeather Tattooshamwari yakanakisisa tattoosmwedzi tattoosGeometric Tattoosback tattooskoi fish tattoooctopus tattooangel tattooscouple tattoosdiamond tattoohanzvadzi tattoosfoot tattoosarrow tattoocompass tattoorudo tattoosbirds tattooslotus flower tattooelephant tattoobutterfly tattoosmaoko tattoosmehndi designarm tattoosAnchor tattoosrip tattoosflower tattoos